सचिवले मन्त्रीलाई भने– जिम्मेवारी तपाईंले होइन, मन्त्रिपरिषद्ले तोक्ने हो – Health Post Nepal
२०७५ पुष २७ गते १२:५६
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन समूहका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सचिवको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्ले तोक्ने भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तोकिएको कार्यविभाजन आफूलाई मान्य नहुने जवाफ दिएका छन् ।
तीन महिना लामो सचिव विवादलाई किनारा लगाउँदै उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले चिकित्सक सचिव डा. पुष्पा चौधरी र प्रशासन समूहका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई मन्त्रालयअन्तर्गतको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेपछि अधिकारीले मन्त्रीलाई यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
जिम्मेवारी बाँडफाँडको सुइँको पाउनासाथ अधिकारीले मन्त्रीलाई भेटेर ‘मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविभाजन गरेर ल्याउनुस्, मान्छु, हैन भने तपाईंले तोक्ने होइन’ भनेको मन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो ।
अधिकारीले पनि आफूले मन्त्रीसँग भेटेर ‘जिम्मेवारी यसरी तोक्न मिल्दैन’ भनेको स्विकारे । ‘मन्त्रीको प्रतिक्रिया के थियो त ?’ भन्ने प्रश्नमा सचिव अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यू केही बोल्नुभएन ।’
मन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका महत्वपूर्ण महाशाखाका जिम्मेवारी यादवले डा. चौधरीलाई दिएको प्रति अधिकारीको असन्तुष्टि छ । अधिकारीले जिम्मेवारी तोकिएको पत्र बुझ्नै इन्कार गर्दै आएका छन् । अधिकारीले पनि आफूले मन्त्रीसँग भेटेर ‘जिम्मेवारी यसरी तोक्न मिल्दैन’ भनेको स्विकारे । ‘मन्त्रीको प्रतिक्रिया के थियो त ?’ भन्ने प्रश्नमा सचिव अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यू केही बोल्नुभएन ।’
सचिव अधिकारीले पनि आफूले पत्र नबुझेको बताए । अधिकारीले सचिवलाई एउटा ऐनले दिएको अधिकार हुने र दुई सचिव भएका मन्त्रालयमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने परम्परा रहेको बताए । ‘पहिले दुईवटा सचिव भएका मन्त्रालयमा कसरी जिम्मेवारी तोकिएका रहेछन्, बुझ्नुुस्,’ उनले हेल्थपोस्टलाई भने, ‘अनि स्वास्थ्यमा के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।’ अधिकारीले नीतिगत रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिले पनि विभाग तोक्ने अधिकार मन्त्रीलाई नहुने जिकिर गरेका छन् ।
यसअघि डा. चौधरीलाई सरकारले सरुवा गरेर नयाँ सचिव नपठाएको समयमा समेत मन्त्री यादवले १२औँ तहका डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहितको निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
कार्यकक्ष पाए पनि लामो समय फाइलविहीन भएकी चौधरी र मन्त्री यादवको सम्बन्ध सुधार्न पछिल्लो समय मन्त्रालयबाहिरको शक्तिले भूमिका खेलेको बुझाइ अधिकारीनिकट कर्मचारीहरूको छ ।
हाल उद्योग, अर्थ, शिक्षा तथा विज्ञान–प्रविधि, कृषि तथा पशु मन्त्रालयमा दुई सचिव छन् । सरकारले २८ असोजमा डा. चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जगेडमा सरुवा गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । सोविरुद्ध अदालत गएकी डा. चौधरीले अदालतबाट आफ्नो पक्षमा आदेश पाएकी थिइन् । यसबीचमा सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासन सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरेर १७ मंसिरमा अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । अधिकारी आएको केही दिनपछि नै डा. चौधरीले अदालतबाट दोस्रो आदेश पाएपछि उनले अधिकारीले बस्न सुरु गरेको कार्यकक्षसमेत ‘कब्जा’ गरेकी थिइन् ।
कार्यकक्ष पाए पनि लामो समय फाइलविहीन भएकी चौधरी र मन्त्री यादवको सम्बन्ध सुधार्न पछिल्लो समय मन्त्रालयबाहिरको शक्तिले भूमिका खेलेको बुझाइ अधिकारीनिकटका कर्मचारीहरूको छ ।
तीन महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन भएकी डा. पुष्पा चौधरीले मन्त्रालयमा स्वास्थ्यतर्फका आकर्षक महाशाखाहरूको र अधिकारीले जनसंख्यासँगै प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी पाएका छन् । मन्त्रीले बाँडफाँड गरेको जिम्मेवारीअनुसार नै मन्त्रालय चल्यो भने सरकारका शक्तिशाली सचिवमध्येका एक मानिने अधिकारीको स्वास्थ्य बसाइ सुःखद नहुने निश्चित छ ।
चौधरीले मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन, समन्वय महाशाखा र मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्यसेवा विभागको जिम्मेवारी पाएकी छिन् ।
अधिकारीले कर्मचारी प्रशासन र जनसंख्या महाशाखासहित औषधि व्यवस्था विभाग र आयुर्वेद विभागको जिम्मेवारी पाएका छन् ।